Tsy Mahazo Mivarotra Zavapisotro Misy Alikaola Ankalamanjana Intsony ao Singapore Aorian’ny Amin’ny Folo sy Sasany Alina · Global Voices teny Malagasy
Tsy Mahazo Mivarotra Zavapisotro Misy Alikaola Ankalamanjana Intsony ao Singapore Aorian'ny Amin'ny Folo sy Sasany Alina
Voadika ny 06 Marsa 2015 12:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, bahasa Indonesia, Español, русский, 日本語, English
Sariitatr'i Andimoo Studios, nahazoana alalana
Nandany lalàna mandrara ny fividianana sy fivarotana zavapisotro misy alikaola, ka tafiditra amin'izany ny fisotroana zava-pisotro misy alikaoka eny amin'ny toeram-bahoaka, manomboka amin'ny folo sy sasany alina ka hatramin'ny fito ora maraina i Singapore.
Ny Volavolan-Dalàna Fanarahamaso ny (Fitsinjarana sy Fisotroana) Zavapisotro misy alikaola, izay nankatoavina teo anivon'ny Parlemanta tamin'ny 30 Janoary 2015, dia hanankery amin'ny Avrily hoavy izao. Hahazo sazy fandoavana onitra hatramin'ny S$1,000 (tokony ho $800 Amerikana) ireo tratra voalohany nanitsakitsaka ny lalàna, ary raha mbola tratra mameri-keloka dia mety hotazonina hatramin'ny telo volana ary handoa onitra tsy mihoatra ny S$2,000 (tokony ho $1,600 amerikana).
Nilaza ny governemanta fa tsy maintsy noraisina ny fepetra taorian'ny nandraisana fitarainana maro mifandraika amin'ny fihetsiky ny olona mamo. Saingy nampahatsiahy ny governemanta ny mpanao gazety Bertha Harian fa efa misy ny lalàna efa mipetraka mifandraika amin'izany olana izany (Lalàna misahana ny Fanitsakitsahana isankarazany). Nanontany izy: “Fa maninona no mbola mandrangaranga maritoa raha efa misy ny fitaovam-piadiana manokana ifanandrinana amin'ny fihetsik'olona mamo?”
Ho an'i Ariffin Sha, izay manoratra hoan'ny tranonkalam-baovao mahaleotena The Online Citizen, ilay lalàna dia “fanehoana miharihary ny fomba fijerin'ny governemanta manivaiva ny olom-pireneny.” Hoy izy:
Manana ny iray amin'ny tsara indrindra, raha tsy ny tsara indrindra amin'ny rafi-pampianarana isika manerantany ary manana ihany ko any taha ambony indrindra manerantany ihany koa amin'ny isan'ny mpanapitrisa raha jerena isan'olona, saingy mbola mila ny governemanta ihany isika hitana ny andraikiny ho mpitaiza zaza
Manahy i Chan Joon Yee fa hijaly noho ny fepetra vaovao ireo mpivarotra madinidinika :
Tsy mivarotra zava-pisotro misy alikaola aho, saingy tsy sarotra ny maminavina ny fiantraikan'ny fepetra tahaka itony eo amin'ny mpitam-barotra mahantra sy miady ho amin'ny fiainana. HIvadika hivarotra vokatra nomainina sy legioma? Tena matotra ve ireo olona ireo? Ka ohatrinona ary ny hofantrano aloan'ny mpitam-barotra? Ho afa-miavotena ve ianao amin'ny fivarotana legioma sy vokatra nomainina amin'ny toerana tahaka ireny?
Hoan'ireo izay hitsangatsangana ao an-jaridaina na hilanona amin'ny toeram-bahoaka, dia tsy maintsy manana fahazoan-dalana ry zareo raha te-hivarotra zavapisotro misy alikaoka mandritra ny lanonana. Mieritreritra i Gavin Khoo, izay manoratra hoan'ny tranonkalam-baovao Coconuts Singapore, fa mety hitera-pahasahiranana hoan'olona maro izy io :
Ataovy an-tsaina izao. Alina mampamolivoly miaraka amin'olona iray tianao, mipetraka amoron-drano, angamba mijery ny afomangan'ny taombaovao – eo no fotoana tsara indrindra hamoahana ny fanontaniana. Na izany aza tsy hahafa-po ny ranomboankazo iray tavoahangy vita amin'ny voaloboka.
Ho setrin'ny tsikera, nilaza ny governemanta fa ny fitsapa-kevitra hitany ny ifotorany, olona efatra amin'ny dimy (81 isanjato) no manohana ny fepetra vaovao momba ny zava-pisotro misy alikaola. Iray amin'ireo Singaporeana mankasitraka ny lalàna i Audrey Kang :
Hitako ny tombony amin'ny lalàna, na dia tsy tiako aza izy eo amin'ny lafiny tokana tsy maintsy handoavana lafo kokoa hividianana zava-pisotro misy alikaoka na mitady toerana ahafaha-misotro… ny fihetsika tsy mifanaraka amin'ny fiaraha-monina ny tian'ny Volavolan-dalàna hihena.
Maro ny mino fa nampidirina ny fepetra ho setrin'ny rotaka tao “Little India” tamin'ny Desambra 2013 izay nifanandrinan'ny vahiny mponina sy ny polisy. Nilaza ny governemanta fa ny alikaola no singa nandray anjara nitarika nankany amin'ny rotaka.
Saingy mikiriy ny governemanta milaza fa tranga naningana ny rotaka ary tsy tokony ampiasaina hanavakavahana vahiny. Tokony hijery ny antsony ihany ny governemanta raha jerena ho manavakavaka ny Lalàna Manaramaso ny Zava-pisotro misy Alikaola raha namaritra ny toera-patorian'ny vahiny ho toeram-bahoaka. Midika izany fa raha afa-misotra alikaola any an-tranony ny Singaporeana, dia voarara tsy hahazo hisotro kosa ny vahiny mpiasa any amin'ny efitrano fatorian-dry zareo, eny fa na dia amin'ny ora tsy iasana aza.
Mbola ratsiratsy kokoa, manome vahana ny polisy ny Lalàna ho afa-mikaroka any amin'ny toerana na seha-bahoaka ahiahiana ho manitsakitsaka ny lalàna. Tsy eritreretina ny tsikeran'ny Singaporeana sasantsasany ilày lalàna ho miangatra mamely ireo vahiny mpiasa kely karama.
Saingy misy ny fomba isotroana ampahibemaso hoan'ny Singaporeana tsy tratran'ny polisy. Alvinology nanome ity torohevitra mampihomehy ity:
Misotroa eo ivelan'ny tokonam-baravaranao
Ny ao an-tranonao dia sehatra tsy idiran'olon-kafa sa tsy izay? Raha misy polisy tonga dia mihemora ho ao an-trano. Rehefa lasa ry zareo dia avoahy ivelany indray ny ila-tongotrao fa mampidi-doza ny fiainanao indray ianao, misotro ampahibemaso tsy ara-dalàna